Apple na-eweta ọgbọ nke abụọ nke Apple Watch | Akụkọ akụrụngwa
Ọ bụghị naanị na iPhone bi ndị na-eso Apple, kamakwa na afọ gara aga na ọkara nke Apple Watch. Mgbe ihe karịrị otu afọ na ọkara kemgbe ọ bịarutere n'ahịa, n'ihi na ebutere ya n'ezie afọ abụọ gara aga, ụlọ ọrụ ndị Cupertino emeela ka Apple Watch dị ọhụrụ, na-egosi ọdịiche dị na nke mbụ site na ịgbakwunye usoro 2 na aha, ya mere ọgbọ mbu Apple Watch, nke ka na-ere ere, bụ Usoro 1.
Banyere ọgbọ nke abụọ nke Apple wearable naanị anyị nwere ike ikwenye nke ọ bụla n’ime asịrị ndị edepụtara ugbu a. Germination nke abụọ na - ejikọ GPS nke na - enye Apple Watch ohere ka ọ rụọ ọrụ n’adabereghị n’onwe ya iburu iPhone ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ijikwa ụzọ anyị gara.
Gụnyere kwa ọ bụ mmiri na-adịghị, Apple akọwapụtaghị akwụkwọ nke nguzogide a, mana ọ na-azọrọ na ọ dị omimi ruo mita 50 miri. Apple ewerewokwa ohere tinye mgbatị ahụ ọhụrụ na mmemme ndị ụmụ amaala Apple Watch na-enye, nke mere na anyị ga-amata oge niile, oke ikpuchi, ọrịa strok na akụrụ ụkwụ anyị mere na ọdọ mmiri.
N'ịbụ ọgbọ ọhụrụ, Usoro 2 a na-egosipụta nhazi na dịka ụlọ ọrụ ahụ si dị bụ 50% ngwa ngwa karịa ọgbọ mbụ ọ na-ejikọkwa GPU ọhụrụ iji meziwanye ọhụụ na arụmọrụ izugbe nke ngwa ihe osise.
Apple eruola nkwekọrịta mmekota na Nike na n'ọnwa Ọktọba ha ga-ewepụta Apple Watch Nike Plus, a smartwatch nlereanya na a ọchịchọ ịmata eriri iji na-agba ọsọ na ndị na-emega ahụ n'èzí. Mana naanị ozi adịghị ebe a, ebe ụlọ ọrụ ahụ agbazinyekwa Apple Watch ọhụrụ nke ejiri seramiiki.
Apple Watch ọhụrụ a, ga-akụ ahịa ahụ na ọnụahịa nke euro 1469 maka ụdị 38-millimita, ọ bụrụ na nkwojiaka anyị chọrọ ihe ngosi 42-millimita ma anyị nwere ike ịkwụ ụgwọ euro 1.519, anyị ga-anụ ụtọ ụdị a pụrụ iche.
Apple Watch Series 1 na Series 2 ahịa
Aluminom Apple Watch Series 1 na-amalite na 339 euro
Aluminom Apple Watch Series 2 bido na 439 euro
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Apple na-ewebata ọgbọ nke abụọ nke Apple Watch
IPhone 7 bụ ọkwa ugbu a, anyị na-egosi gị atụmatụ ya niile